Bacda waraaqda Kraft waxay ku saleysan tahay xaashi xaashi, midabku wuxuu u qaybsan yahay warqad cad oo cadaan ah iyo warqad jaalle ah oo jaalle ah, wuxuu isticmaali karaa wax PP ah warqada oo leh lakab filim ah, saameyn aan biyuhu lahayn, awooda bacda waxaa lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha mid ilaa lix lakab, daabacaadda iyo isku-dhafka boorsada. Fur ...
Tallaabo kasta oo Hongbang ah waxaa ka buuxa goosashada. Bandhigga caalamiga ee ka dhacay Indonesia, Hongbang mar kale ayuu u baxay. Waxay ahayd guul dhameystiran waxaana lagu wareystay barnaamij TV maxali ah. Bandhiggan, waxaan markale ku muujineynaa ruuxa Hongbang - midnimo, togan, adag str ...
Bandhigga daabacaadda iyo baakadaha caalamiga ah ee Hong Kong
Bandhigga 7-aad ee Caalamiga ah ee daabacaadda iyo baakadaha ee Hong Kong waa madal ganacsi oo sumcad iyo dhif ah oo hal-joogsi u ah warshadaha. Waxay noqotay buundo muhiim ah iyo xarun isku xira daabacaadda iyo adeeg bixiyaasha baakadaha ee shirkadaha wax soo saarayaasha caalamiga ah, adeeg bixiyaha ...